🥇 ▷ Barnaamijyada aad ku guuleysatay & # 039; t ka hesho Google Play, hadda soo degso! ✅
Barnaamijyada aad ku guuleysatay & # 039; t ka hesho Google Play, hadda soo degso!
Kuwa inaga mid ah ee adeegsadayaasha Android, marka aan u baahan nahay inaan soo dejino Codsi waxaan toos ugu tagnaa Google Play Store; halka aan ka helno barnaamijyo aan tiro lahayn, si kastaba ha noqotee waxaa jira dalabyo waaweyn oo aan dhammaad lahayn oo aadan ka heli doontid dukaankaan; hore waxaan uga wada hadalnay sida ugu wanaagsan ee xiriiriyeyaashaada. Halkan waxaad ka ogaan doontaa barnaamijyada ugu fiican oo aadan ka heli doonin Google Play.
Waa muhiim inaad ogaato in barnaamijyadan aadan ka heli doonin google play, waxaa loo yaqaanaa apk; maadaama ay yihiin xirmo codsiyada Android isku buuqsan oo ka kooban dhammaan ilaha barnaamijyada. Apkku waa fayl Zip ah oo leh magac kale, sidaa darteed barnaamijyada sida WinRAR waxay awoodaan inay baabi’iyaan iyadoon wax dhibaatooyin ah la kulmin.
SnapTube – barnaamijyada si aad ah loogu taliyay oo aadan ka heli doonin ciyaarta google, waxaad heleysaa muuqaalka aad doorato
Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu taliyay; halkan waxaad ka soo degsan kartaa fiidiyowyo Youtube, Facebook, instagram, Funny Gif, Shopping, ANIME FLV, vevo iyo inbadan. Waa codsi weyn, fududahay in la isticmaalo oo aad u dhakhso badan. Waa maktabad meesha aad ka heli doonto fiidiyowga aad dooratay; Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo faylasha ee Mp3, waxaad kala soo bixi kartaa qaabka aad rabto. Barnaamijyada aadan ka heli doonin dukaanka Google Play.
Isku-Duwaha Humble – Howsha arjiga waa mid aad u fudud
Barnaamijkan oo aadan ka heli doonin gudaha qalabka wax lagu dhejiyo ayaa kuu oggolaanaya inaad soo dejiso oo aad dhejiso ciyaarta fiidiyaha ee aad iibsato; sidaas awgeed Liiska Ciyaaraha hada la soo bixi karo waa xoogaa xadidan; in kasta oo tayada magacyadu aad u sarreeyaan.
LMT Launcher – wuxuu u beddelaa xaalad-baarka xaalad liis goos goos ah
Soo-saarehani wuxuu u rogayaa bar-tilmaameedka xaalad liis goos goos ah oo leh dhammaan xulashooyinka gudaha; Natiijo ahaan, waxay siisaa interface qaab badan, oo ka dhigaysa helitaanka qalabkaaga android mid aad u fudud oo firfircoon. Waad sidoo kale dayac-tir kartaa, adoo galaya jid-gooyooyin loogu talagalay barnaamijyada kale, sida caadiga ah waad iska qaadan kartaa shaashadda, waxaad dhaqaajin kartaa raadinta, ku xirmi kartaa iyo xiri kartaa WiFi, howlaha kale. Barnaamijyada aadan ka heli doonin gudaha qasabadda.
Xariirka Tv-ga – Howlgalkiisu wuxuu la mid yahay goob kasta oo taxane ah
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad daawato marxalado taxane ah oo muujinaya barnaamijyo TV kala duwan, iyo waliba filim kasta. Dhab ahaantii Howlgalkeedu wuxuu la mid yahay goob kasta oo taxane ah. Waad raadin kartaa barnaamijyada waxaadna ka heli kartaa xiriiriyeyaasha dibadda si aad uga aragtid meel ka baxsan arjiga. Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijkan oo aadan ka heli doonin Google Play waa in gabi ahaanba bilaash tahay.
F-Droid – Waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso barnaamijyo badan oo aan ku jirin google play.
Waxaan liiskan ku xireynaa F-Droid kaas oo ah dukaan kale oo lagu soo dejiyo barnaamijyada, wax aad ugu eg Google Play, laakiin codsiyada aan jirin; Dhammaan waxyaabaha ku jira waa bilaash; Waad soo dagsankartaa codsiyada xitaa adiga oo aan lahayn xiriir internet.
Shaki la’aan muranka dhulku waa mid aan xad lahayn. Ha u degin hal dukaan oo ha sahamin boggag kale ama websaydh, awood u leh waxaadna u heshaa waxaad ubaahantahay android.